Top Yoga mgbaba na Europe | Save A Train
Home > Yoga na Europe > Top Yoga mgbaba na Europe
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 26/09/2020)
Ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ gbaga n'elu yoga mgbaba na Europe maka gị ọzọ ezumike, ị na chi. Ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị mma na mba Europe nwere ọtụtụ na-enye mgbe ọ na-abịa yoga na-atụrụ. Ọ bụ ezie na India a na-ewere na-kasị yoga ebe ụwa, Europe n'ezie elu omume ma nabata ya dị ka ha onwe ha. Ebe a bụ ụfọdụ n'ime n'elu yoga mgbaba na Europe, nakwa dị ka ụzọ nke na-e ụgbọ okporo ígwè:
Yoga mgbaba na Italy
mara mma, calming mma aghaghị ibuli gị yoga omume - ghara ikwu ọcha ikuku na anwụ. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe ị na-achọ, mgbe Italy bụ unu ebe. Of niile ọmarịcha yoga ichighaazu ebe ẹsio, anyị amara ndị na Tuscany. Ị nwere ike na- sinik ụgbọ okporo ígwè site na mpaghara na-akwụsị ndị njem na a yoga ichighaazu na Chianti. ụtọ anwụ, wine na-anọ echeta na ugbu a - ihe pụrụ ịdị mma?
Perugia ka Castellina Chianti Ụgbọ oloko
Yoga mgbaba na France
N'ihi na ndị gị na ịhụnanya na- ugwu, French Alps na-aga na-ohere i nwere ike na-atụ uche. Ndị ọzọ karịa mgbe yoga, na French Alps, yoga mgbaba i nwere ike ime hiking, yoga, ọcha mmiri rafting, na ọbụna paragliding. Annecy bụ oké obodo ileta n'ihi nzube a, na i nwere ike iru ya ụgbọ okporo ígwè si Paris. Ọ na-emekwa ihe njem ruru eru maka ndị mmadụ na-ahọrọ a karị ndụ.
Paris na Annecy Ụgbọ oloko
Geneva ka Annecy Ụgbọ oloko
Yoga mgbaba na UK
The UK nwere ọtụtụ ebe mara mma agbaga, breathtaking ebe agbahapụ ka, ka Glastonbury, Devon, Kent, Scotland, na ndị ọzọ. Otú ọ dị, anyị ka na-amasị London n'ihi na ya pụrụ iche mmụọ nsọ na ikuku. Ọ bụrụ na ị na-achọ a n'obodo ndị mepere emepe yoga ichighaazu ahụmahụ, mgbe London bụ a ezi nhọrọ. The ọtụtụ nhọrọ ga-eme ka gị isi atụ ogho - e nwere ihe ọ bụla yoga uto. Ị nwere ike mfe iru obodo ụgbọ okporo ígwè si kasị isi obodo na Europe, nke mere na ihe ọzọ bonus.
Germany na-ewe ya Wellness kpọrọ ihe ma na-emekarị na-agwakọta a yoga omume na a full spa ahụmahụ. Ọ bụ ezigbo maka ezumike mgbe ị chọrọ fanye gị batrị na kwụpụ efep ọtụtụ ndụ. Germany ọbụna awade-agbachi nkịtị kpamkpam mgbaba, na otutu mindfulness ekpere omume na ụfọdụ oké spa agwọ ọrịa. Ikwe nkịtị na ịdị n'udo nke ọdịdị na-asa nchegbu pụọ bụ ihe magburu onwe Ntụziaka maka ezumike. Ọ bụrụ na a na-ada ka ihe i nwere ike, ị nwere ike n'akwụkwọ a ụgbọ okporo ígwè na Bavarian Alps.
Austria hụrụ ya oyi yoga mgbaba, nke na-eme ya a zuru okè ebe n'oge a na oge nke afọ. Ntak na-enweta oge niile nke ebube ya? Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-asị oyi, ị na-aghaghị ịghọta otú yoga mgbaba na Austria-eme ka ọ blissful. Ha na-oyi na-atụ weather ma na-atụgharị ya n'ime a ahụ ike-akwalite usoro, incorporating dị iche iche ka e nwee nke yoga, hikes na udo ụra mbo mbuli gị na dịghịzi usoro. Salzburg bụ otu n'ime Austrian obodo ebe i nwere ike na-enweta nke a, na i nwere ike iru ya ụgbọ okporo ígwè.
Prague ka Salzburg Ụgbọ oloko
Njikere maka gị nrọ yoga getaway na otu nke n'elu aga Europe? Akwụkwọ gị gbaa ụgbọ okporo ígwè n'ihi na otu onye nke n'elu yoga mgbaba na Europe n'oge maka ihe kasị mma amụọ na oche!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fyoga-retreats-europe-train%2F - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml na i nwere ike ịgbanwe / pl na / de ma ọ bụ / ru na ndị ọzọ asụsụ.
#na-atụgharị uche #peacefulness #relaxation #Yoga europetravel Train Travel